Accueil > Gazetin'ny nosy > Miaramila Jeneraly: Miantso ny tsirairay handray ny andraikiny
Miaramila Jeneraly: Miantso ny tsirairay handray ny andraikiny
Tsy mba misy misotro ronono izany ny miaramila jeneraly fa rehefa ilain’ny tanindrazana dia tsy maintsy mandray andraikitra. Toa izany koa ny manamboninahitra ambony, hoy ihany ireo Jeneraly sy Manamboninahitra ambony eto anivon’ny firenena, izay tsy amperin’asa intsony fa misotro ronono.
Niantso ny olona tsirairay eto amin’ny firenena handray ny andraikiny araka ny tandrify azy avy izy ireo omaly alarobia faha 11 aprily 2018, tamin’ny 11 ora tsy diso tetsy amin’ny hôtely “La Rotonde” tetsy Besarety.
Tsy fanambarana intsony no nataon’izy ireo araka ny voalazany fa antso ho an’ny tompon’andraikitra tsirairay fa indrindra ny eo anivon’ny fitondram-panjakana sy ny foloalindahy. Toa izao indrindra no voalazan’izy ireo amin’izany:
“Izahay Jeneraly sy Manamboninahitra ambony eto anivon’ny firenena, izay tsy amperin’asa intsony, nefa araka ny fenitra hoe rehefa misy ilain’ny Tanindrazana anay dia tsy maintsy mijoro ho an’ny Tanindrazana.
Fotoan-dehibe eto amin’ny fiainan’ny firenena ity taona 2018 ity, satria tokoa mantsy ho tanterahina amin’ny faran’ny taona ny fifidianana filoham-pirenena hitondra ny tany sy ny fanjakana. Ankehitriny anefa dia miaina ao anatin’ny ahiahy sy ny tebiteby ny maro an’isa.
Tao miha marefo ny andrim-panjakana samihafa noho ny resaka kolikoly, ny fanamparam-pahefana, tsy fanarahan-dalàna, ka very fanahy mbola velona ireo valala tsy mandady harona.
Mipetraka noho izany ny fanontaniana hoe: Hizotra amim-pahamarinana sy amin-kalalahana tokoa ve izany fifidianana izany? Ho voahaja ve ny zo fototra ny olom-pirenena?
Ilaina ny fitoniana, mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana. Hita taratra tamin’ireny zava-niseho teny amin’ny Antenimierampirenena ireny anefa fa miroso any amin’ny disadisa lalina isika.
Tsy azo atao takalon’aina intsony ny vahoaka noho ny tsy fisian’ny fifampihainoana eo amin’ny fitantanana ny raharaha eto amin’ny firenena. Koa manao antso avo eo amin’ny tompon’andraikitra isan-tokony izahay mba hisoroka izay mety hampiditra ny firenena amin’ny krizy.
Ho anareo tompon’andraikitra sy mpitandro ny filaminana, aoka mba hiaro ny vahoaka sy ny fananany ianareo, ka tsy ho sanatria ho sakanan’ny fiaraha-monina demôkratika tan-dalàna manaja ny soa toavina maha Malagasy.
Ho anareo mpitondra sy mpisehatra ara-pôlitika rehetra, aoka mba hametraka ho ambony ny tombotsoam-pirenena, mba hisian’ny filaminana sy ny fitoniana eto amin’ny tany sy ny fanjakana, ka hanaja ny Lalàmpanorenana sy hampanjaka ireo zo fototra ny olom-pirenena.
Miantso anareo zandry ato amin’ny foloalindahy izahay zokinareo, hisoroka ny tsy mety rehetra, mba tsy hanasokajian’ny ny mpiray tanindrazana amintsika ho herim-pamoretana.
Ny tombotsoa ambonin’ny firenena ihany no aoka ho tsinjovina sy ho tandrovina. Ny foloalindahy sy ny mpitandro ny filaminana no tandroka aron’ny vozona, ary fiarovana farany ho an’ny vahoaka sy ny fireneny. Ho an’ny Tanindrazana.”
Manao sonia izany ny Jeneraly maromaro: Général de division Robert, ny Général de brigade Rakotondramanana René Daniel, ny Général de brigade Urbain Watter, Médecin Général de brigade (ER), Colonel Tsimiera Esperant, ny Colonel Rakotondratsija, ny Général de division Voahangy Andriamanalinarivo, ny Général de brigade Retozy, ny Colonel Rasamisaonina, ny Général de brigade Rabearivoavy Justin, ny Colonel Rabelahy Martin, ny Colonel Razafimanantsoa M.,ny Colonel Rajaonina Arivony, ary Rakotovelo CGP retraité. Tonga tao koa ny Jeneraly Fidy. Ireo no fanambaran’ny Jeneraly sy kolonely misotro ronono raha nanao antso ho an’ny firenena izy ireo.
Mampahatsiahy ny Jeneraly de Gaulle tany Frantsa tamin’ny Frantsay latsaka ankaterena taorian’ny Ady lehibe Faharoa ity raharaha ity.
Mbola mampahatsiahy ny raharaha teto Madagasikara tamin’ny taona 2001-2002 izay nisian’ny zanadambo na ireo miaramila milisin’ingahy Ravalomanana Marc niady tamin’ny miaramila ara-dalàna tamin’izany fotoana izany koa iny fanambarana iny.
Midika izany fa alohalika ny ranombary eto Madagasikara ka tokony hieritreritra mafy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa sao tara loatra ka hanenina eo indray.